Akadeemiye Goboleedka daryeelka Afka hooyo oo la dhagax dhigay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray Muqdisho ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Madaxwyenaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda.
Labada Madaxweyne ayaa waxa ay si wada jir ah salaam sharaf uga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida iyo kooxda baambeyda Muusikada, waxaana uu mid mid u gacan qaaday intii ku soo dhaweysay garoonka Aadan Cadde.
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa ay si wada jir ah u dhagax dhigeen Xarunta Akadeemiya Goboleedka daryeelka Afka Soomaaliya, kaasi oo laga dhisayo degmada Shangaani ee gobolka Banaadir.
Labada Madaxweyne waxa ay sheegeen in xaruntan ay wax badan ka tari doonto horumarinta Afka Soomaaliga.
DEG DEG-Sawirada shirka ka socda Hotel City plasa ee Muqdisho